स्वास्थ्य/जिबनशैली Archives - Page 45 of 58 - Taja Report
कीराले दिमाग सम्म पुगेर उत्तेजित गर्छ र छारेरोग लाग्छ, तर हुन्छ उपचार, आखिर कसरी पुग्छ दिमागमा किरा ?
July 7, 2018 Comments Off on कीराले दिमाग सम्म पुगेर उत्तेजित गर्छ र छारेरोग लाग्छ, तर हुन्छ उपचार, आखिर कसरी पुग्छ दिमागमा किरा ?
काठमाडौँ–हाम्रो समाजमा छारेरोगीलाई स्वास्थ्य संस्था लानुभन्दा पनि धामी झाँक्रीकोमा लाने चलन अझै हराएको छैन । छारेरोगको समस्या कुल जनसङ्ख्याको १ प्रतिशतलाई हुन्छ । त्यसमा पनि रोगीमध्ये २५ प्रतिशत मात्रै स्वास्थ्य संस्था आइपुग्ने गरेका छन् । [ पुरा पढ्नुहोस ]
तपाईंको ओठमा कालोपना छ भने यी विधि अपनाउनुस् ! यसरी हटाउँनु होस्
July 7, 2018 Comments Off on तपाईंको ओठमा कालोपना छ भने यी विधि अपनाउनुस् ! यसरी हटाउँनु होस्
अनुहारलाई सुन्दर बनाउने एक महत्वपूर्ण अंग ओठ पनि हो । अनुहारका अन्य भाग राम्रो भए पनि ओठ कुरुप छ भने त्यसलाई सुन्दर मान्न सकिदैन। अथवा सुन्दरतामा निखार ल्याउने प्रमुख अंग ओठ नै हो। कतिपय महिला [ पुरा पढ्नुहोस ]
July 7, 2018 Comments Off on अभिन्न अंग किड्नी जोगाउने १० तरिका जसले किड्नी सुरक्षित राख्छ ! पढेर सबैलाई जानकारीको लागि सेयर गर्नुहोस
किडनी अर्थात मृगौला शरीरको निक्कै महत्वपूर्ण अंग मध्ये एक हो। यसले शरीरमा रगत सफा गर्ने देखि, हार्मोन बनाउने, खनिज सोक्ने, मुत्र उत्पादन गर्ने, टक्सिन अर्थात खराव पदार्थहरुलाई शरीरबाट निकाल्ने तथा एसिडको सन्तुलन बनाउने जस्ता काम [ पुरा पढ्नुहोस ]
प्रत्यक नारीहरु ले जान्नै पर्ने- यी हुन् केही दिनमै अनुहार गोरो र चम्किलो बनाउने घरेलु उपाय
July 7, 2018 Comments Off on प्रत्यक नारीहरु ले जान्नै पर्ने- यी हुन् केही दिनमै अनुहार गोरो र चम्किलो बनाउने घरेलु उपाय
हामी अनुहारलाई लिएर निकै चिन्तित हुने गर्दछौ । सुन्दर, गोरो र चम्किलो अनुहार बनाउन सधै प्रयासरत पनि हुन्छौ । क्रिम पाउडर आदि लगाएर पनि अनुहार टल्काउने गर्दछौ। तर घरेलु उपाय भने हामीलाई थाहा नहुन सक्छ [ पुरा पढ्नुहोस ]
तरकारकिो राजा तामा हुन्छ बिषेश गुण, जसले गर्छ धेरै दिर्घ रोगलाई फाइदा
July 7, 2018 Comments Off on तरकारकिो राजा तामा हुन्छ बिषेश गुण, जसले गर्छ धेरै दिर्घ रोगलाई फाइदा
तामाको नाम सुन्ने वित्तिकै धेरेको मुखमा मिठो पान िआउने गर्छ, तामाको अचार तर तरकारीले धेरैको मन लोभ्याएको हुन्छ । तर तामालाई धेरै परिकारको रुपमा कसरी तयार पारिन्छ भन्ने कुरा लगभग धेरै गृहिणीहरूलाई थाहा छ । [ पुरा पढ्नुहोस ]
अत्यधिक मात्रामा तुरुन्तै “सेक्स पावर” बढाउने घरेलु औषधी !
July 7, 2018 Comments Off on अत्यधिक मात्रामा तुरुन्तै “सेक्स पावर” बढाउने घरेलु औषधी !
अत्यधिक मात्रामा तुरुन्तै “सेक्स पावर” बढाउने घरेलु औषधी ! यौन दुर्बलताले धेरै मानिस पीडित छन् । यसको उपचारको लागि कतिपयले बजारमा पाइने बिभिन्न प्रकारका औषधी प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता औषधीको प्रयोगबाट दीर्घकालीन रुपमा स्वास्थ्यमा [ पुरा पढ्नुहोस ]
आँकका २ पात जसले च्वाट्टै पर्छन सुगर अर्थात् मधुमेह (यसरी प्रयोग गर्नुहोस)
July 7, 2018 Comments Off on आँकका २ पात जसले च्वाट्टै पर्छन सुगर अर्थात् मधुमेह (यसरी प्रयोग गर्नुहोस)
आँकका २ पात जसले च्वाट्टै पर्छन सुगर अर्थात् मधुमेह (यसरी प्रयोग गर्नुहोस) आँकका २ पात जसले च्वाट्टै पर्छन सुगर अर्थात् मधुमेह (यसरि प्रयोग गर्नुहोस) अमेरिकन डाईबेटिज एसोसिएसन (एडीए) र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डव्लुएचओ) का अनुसार [ पुरा पढ्नुहोस ]
सेतो दुबीका लागि अमृत समान घ्यू, यस्ता अन्य आश्चर्यजनक फाइदा
July 7, 2018 Comments Off on सेतो दुबीका लागि अमृत समान घ्यू, यस्ता अन्य आश्चर्यजनक फाइदा
हामी घ्यूको सेवन खानका लागि गछौँ। तर त्यसका फाइदाका बारेमा धेरैलाई थाहाँ नहुन सकछ। आज हामी घ्यूका आश्चर्यजनक फाइदाका बारेमा जानकारी दिदैछौँ । जो तपाईका लागि उनि उपयोगी हुन सक्छ। सेतो दुवी आएमा रायोको धूलो [ पुरा पढ्नुहोस ]
July 6, 2018 Comments Off on एसीमा धेरै बस्नुहुन्छ, सावधान ! स्वास्थ्यमा यस्ता ९ गम्भीर असर देखिन्छन्
हिजोआज धेरैजसो व्यक्तिलाई दैनिक ८ देखि ९ घण्टा एयर कन्डिसनर(ए.सी)मा बस्नु पर्ने हुन्छ । अलबामा विश्वविद्यालयको एक अध्ययनअनुसार, ए.सीले कृत्रिम तापक्रम बनाउँछ, जसको कारण शरीरमा नराम्रो असर पर्छ । त्यसो भए जान्नुहोस्, के कस्तो असर [ पुरा पढ्नुहोस ]
कुमको दुखाइ यसरी हटाउनुहोस् (भिडियो सहित)
July 6, 2018 Comments Off on कुमको दुखाइ यसरी हटाउनुहोस् (भिडियो सहित)
नेपालको कृषि प्रणाली आधुनिक शैलीको भै नसकेको अवस्थामा उभिएर, निहुँरिएर काम गर्नु पर्ने बाध्यता छ । अन्य पेशामा रहेका मानिसले पनि लामो समय एकै आसनमा बसेर काम गर्ने गरेका छन् । यस्तो दैनिकीले पछि गएर [ पुरा पढ्नुहोस ]